टिकटकमा भाईरल हिरो जस्तो ‘भुपु पुलिस’ जिम्बे राईको सबैलाई रुवाउने कथा । श्रीमतीसँग छुटिदा पागल नै भए ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 4, 2021 July 4, 2021 AdminLeaveaComment on टिकटकमा भाईरल हिरो जस्तो ‘भुपु पुलिस’ जिम्बे राईको सबैलाई रुवाउने कथा । श्रीमतीसँग छुटिदा पागल नै भए ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
टिकटकमा भाईरल छन्, जिम्बे राई । उनी भुपु प्रहरी हुन् । तर उनको बिचमा श्रीमतीसँग बे’मेल भयो । उनी मिडियामा आए । आखिर कसरी परिवार टुट्छ त ? बाउ छोरा बीच वैमनस्य, दाजुभाइ बीच पानी बराबरका घ’टना हाम्रो समाजमा नौलो होइन । विविध कारणले हाम्रो समाजमा पारिवारिक एकता कमजोर हुँदै गइरहेका छन् ।
जोडिनुको सट्टा भत्किरहेका छन् परिवारहरू । समाजशास्त्री डा. मीना उप्रेती भन्छिन्, ‘पछिल्लो समय धेरैजसो परिवारमा नि’राशावादी चि’न्तन बढेको छ, एकताभन्दा बढी विचलन छ ।’ केही महिना अघि एउटा अनुसन्धानका क्रममा डा. उप्रेती थुप्रै परिवार कहाँ पुगेकी थिइन् । त्यतिबेला थुप्रै महिलाले परिवारलाई बलियो बनाउन समय र प्रेम महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए ।
‘धेरै महिलाले मलाई ‘पैसा मात्र होइन, समय पनि चाहियो, प्रेम पनि गर्नुप¥यो’ भन्दै गुनासो पोखेका थिए,’ उनले सुनाइन् । त्यसो त पछिल्लो समय आर्थिक कारणले परिवारहरू टुक्रिरहेका छन् । अंशबण्डा गरेर छुट्टिरहेका छन् । अन्तर जातीय बिहेलाई स्विकार्न नसक्दा पनि परिवार भित्र विग्रह निम्तिइरहेको छ ।
समाजशास्त्री उप्रेती भन्छिन्, ‘स–सानो कारणले परिवार टुक्रिरहेको छ । जस्तैः रक्सी खाएको कारण, अर्कोसँग बोलेको कारण, तरकारीमा नुन नहालेको, जागिर छोडेका आदि–इत्यादी ।’ जिम्बेको परिवार कसरी टुट्यो । जीवनमा सानैदेखि दुख गरेका जिम्बे टिकटकमा आफ्ना मनका भावनाहरु भन्दछन् । श्रीमती सँगको बिछोड पछि पनि उनी अर्को प्रेममा परे र झण्डै पागल जस्तै भए । उनले शिशिर भण्डारीलाई भेटेर आफ्ना सारा दु’ख सुनाए ।